MP U Shwe Maungs’ activities: Member of Parliament at Pyithu Hluttaw | Danya Wadi
»MP U Shwe Maungs’ activities: Member of Parliament at Pyithu Hluttaw
You are cordially invited to visit my social media links.
Member of Parliament at Pyithu Hluttaw ပြည်သူ့ လွှတ်တော်
for Buthidaung Constituency, Rakhine State, Myanmar
(1) – U Shwe Maung’s Facebook link
(2) – U Shwe Maung’s Facebook– pages link
(3) – MP U Shwe Maung’s Youtube Link
(4) – MP U Shwe Maung , Twitter Link
Coffee With Researchers: Inquiry Commission Report
Please Click the to watch more
by Shwe Maung
Coffee with Researchers: My Political Career & Cit
Coffee with Researchers: My Political Career and Citizenship
By danyawadi December 4, 2013 Leaveacomment
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာပူးတွဲအတူနေထိုင်ရေး ကိစ္စတွေကို အကောင် အထည်ဖေါ်ဆောင် ရွက်တဲ့နေရာမှာ တစ်ဖက်သတ်ပြောဆိုစွပ်စွဲနေမယ်၊ အမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုနေမယ်၊ မသေချာမရေရာသော သတင်းအချက် အလက်ပေါ်မူတည်ပြီး ပုံကြီးချဲ့စိုးရမ် မှုတွေပြနေမယ်၊ သေချာခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားတွေကို မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးငြင်းနေမယ်ဆိုရင် အောင်မြင် မှာမဟုတ်ပါ ဘူး။ အချိန်ကုန်လူ ပန်းဘဲဖြစ်မှာပါ။ လူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့အမည်ကို အဲဒီလူမျိုးစုရဲ့ ဆန္ဒသဘောတူညီမှုမရှိဘဲ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် Bangladesh ဆိုတဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခု ပေါ်ပေါက် လာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး ဘင်္ဂါလီလူမျိုးဟုပြောင်းခေါ်တာ၊ သတ်မှတ်တာဟာ ယုတ္တိရှိသလား ဥပဒေနှင့်ညီသလား ဆိုတာ ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Bangladesh နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ ဒိုင်းနက်၊ သက်၊ ရခိုင်၊ မရမာကြီးလူမျိုးတွေကို မြန်မာလို့မခေါ်ပါဘူး၊ Bangladeshi သို့မဟုတ် Bengali […]
MP U Shwe Maung seeks advice and help from Nobel Laureate Tutu Dy
By danyawadi February 27, 2013 Leaveacomment
MP U Shwe Maung seeks advice and help from Nobel Laureate Tutu DyFebruary 26, 2013 Letter, U_Shwe_Maung Nobel peace prize winner Desmond Tutu arrived in Myanmar on Monday. According to the message posted by MP U Shwe Maung on Twitter, Tutu would giveaspeech at the American Centre in Yangon on Wednesday. U Shwe […]
President U Thein Sein and wife Daw Khin Khin Win cordially greet Pyithu Hluttaw Representative for Buthidaung U Shwe Maung (a.k.a) U Abdul Razak
By danyawadi February 16, 2013 Leaveacomment
President U Thein Sein and wife Daw Khin Khin Win cordially greet Pyithu Hluttaw Representative for Buthidaung U Shwe Maung (a.k.a) U Abdul Razak at the reception and dinner to mark 66th Anniversary Union Day in Nay Pyi Taw on 12 February 2013.
Excerpt from the speech of MP U Shwe Maung @ Abdul Razak ( Part-1 )
By danyawadi July 30, 2012 Leaveacomment
(14th day of regular session of Parliament on 25 July 2012 in Naypyitaw ) 1. The MP discussed according the following points.. a. Root causes of eruption of violence b. Factors contributing the escalation of violence for weeks c. Prevention of repetition of similar violence and peaceful coexistence d. Current situation of Arakan and to […]
Rohingya MP slams Rakhine inquiry commission report as “unfair”
Shwe Maung,aRohingya member of parliament from Rakhine state, objected to the commission’s te…rminology, saying that the word “Bengali” fails to reflect reality and people’s sense of their own identity. “The report is unfair,” he said. “The usage and recommendations are similar to what Rakhine ethnic people have been demanding.” Immigration officials have begun […]
Ruling Party MP Warns of Renewed Arakan Violence Wednesday, March 13, 2013 Arakan Burma, irrawaddy, MP U Shwe Maung, Rakhine, Rohingya USDP Lower House MP for Buthidaung Township Shwe Maung (Photo: Patrick Boehler / The Irrawaddy) Irrawaddy News: March 13, 2013 RANGOON — A member of Parliament for Burma’s ruling Union and Solidarity Party (USDP) […]
Friday, February 22, 2013 Arakan Burma, DVB, MP U Shwe Maung, Parliament Shwe Maung represents Buthidaung constituency in northern Arakan state. (Photo: DVB) Hanna Hindstrom Democratic Voice of Burma February 22, 2013 A member of parliament has fired back at claims that Rohingya Muslims do not exist in Burma, afterasenior government minister allegedly […]
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်နှင့် UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs Valerie Amos တို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင်တွေ့ရစဉ် …
By danyawadi December 9, 2012 1 Comment
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်နှင့် UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs Valerie Amos တို့သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲတွင်တွေ့ရစဉ် (ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၂)Buthidaung Constituency MP U Shwe Maung attended the Press Conference of UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs Valerie Amos. (Photo – U Shwe Maung)
လွှတ်တော်အမတ်ဦးရွှေမောင်မှ၁၉၈၂ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့ တင်ပြဆွေးနွေးချက် (ရုပ်/သံ) ….
ပါလီမန်အမတ်ဦးရွှေမောင်, ရိုဟင်ဂျာသတင်း MP U Shwe Maung Explained on Amendment 1982 Citizenship Law on 25 July 2012. MP U Shwe Maung explained on amendment of 1982 Citizenship Law to be consistent with the Constitution of Myanmar (Year 2008) and Human Rights standard at Pyithu Hluttaw (Lower House) Assembly on 25 July 2012.
By danyawadi November 21, 2013 Leaveacomment
20.11.13 voa news မြန်မာနိုငံင်ဟာ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုငံင်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့အတွက် မိသားစုသေဘာနဲ့ တိုက်တွန်းတယ်လို့ ယူဆေကြာင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်က ပြည်ထောစုင်ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်းက ဗွီအိုအေ ကို ပြော ပါ တယ်။ “ဒါမျိုးတိုက် တွန်းတာဟာ ကျနော်တို့နိုငံင်မှာလည်း လိုအပ်ချက်တစ်ခုလို ဖြစ်နေ လို့ အပြုသေဘာနဲ့ တိုက်တွန်းတယ်လို့ပဲ ကျနော် ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စ ကို အမှန်တကယ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရမှာကေတာ့ ကျနော်တို့ နိုငံင်တော် အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ရှိပါတယ်။ နှစ်ဘက် လူမျိုး စုခေါင်းဆောင်တွေ ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ နိုငံင်သားအဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ပြလို့ရှိရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ သက်ဆိုင်ရာဒေသဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိသေးတယ်။ ဒီဟာကို အားလုံးနဲ့ […]
ရှေ့နေငှားခွင့်မပေးခြင်းသည်ဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိ ၍ ဖြစ် သည် ဟု ဦးရွှေမောင်ပြော
RB News 31.8.2013 လွန်ခဲ့သည့် အပတ်က ရိုဟင်ဂျာ ၇၆ ဦးကို ရခိုင် ပြည်နယ် တရားရုံး များက လွန်ခဲ့သည့် နှစ်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက် မှုများတွင် ပါဝင်သူ များဟု စွပ်စွဲပြီး နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ် ခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာ အရေး လှုပ်ရှားသည့် အာရ်ကာန် ပရောဂျက်မှ ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်တော မြို့နယ် တရားရုံး များမှ အမိန့်ချမှတ် ခဲ့သည်ဟု ဧရာဝတီ သတင်း ဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် သြဂုတ်လ (၃၀) ရက်နေ့ သတင်းတွင် ရေးသား ဖော်ပြထား ပါသည်။ သြဂုတ်လ (၂၀) နှင့် (၂၁) ရက်နေ့ […]
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အားနည်းနေသည်ဟု လွှတ်တော်အမတ် ဦးရွှေမောင်မှပြော
By danyawadi July 1, 2013 Leaveacomment
RB News 1.7.2013 ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းမှ စ၍ သံတွဲမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှု များသည် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု အားနည်း နေသည့် အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ များမှ စံနှစ်မျိုးဖြင့် အခြေ အနေ ကို ထိန်းသိမ်း နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ကိုယ်စားပြု ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်မှ ၎င်း၏ ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာ တွင်ရေးသား ဖော်ပြ ထားသည်။ သံတွဲမြို့တွင် ညမထွက်ရ အမိန့် မထုတ်ပြန်မှီ နေအိမ် အချို့နှင့် ကောင်းကင် သစ္စာ ကားဂိတ် ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ညမထွက်ရ အမိန့် ထုတ်ပြန် […]
ရိုဟင်ဂျာ များသည် ကိုလိုနီခေတ် အခြေချသူများ မဟုတ်ဟု ဦးရွှေမောင် ပြောကြား
By danyawadi April 2, 2013 Leaveacomment
RB News 1.4.2013 ရန်ကုန် ။ ။ ရခိုင် ပဋိပက္ခ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာကို ယမန်နေ့ က နိုင် ငံတော် သမ္မတရုံးသို့ တင်သွင်းရန် ရက်သတ်မှတ် ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့ တွင် သာ တင်သွင်း မည်ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်မှ သတင်းတစ်ရပ် ထုတ်ပြန် လိုက် ပါသည်။ ယင်းအစီရင် ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ ရခိုင် ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင် မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်အား ဗွီအိုအေ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်မှ မေးမြန်းထားသည် ကို လည်း အောက်ပါ […]
အာဏာရ ပါတီ လွှတ်တော် အမတ် ဦးရွှေမောင်မှ အကြမ်းဖက်မှု ထပ်မံ မဖြစ်ပွား စေရန် သတိပေး
15.3.2013 ရန်ကုန် ။ ။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အာဏာရ ပါတီ ဖြစ်သည့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီမှ လွှတ်တော် အမတ် တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဦးရွှေမောင်မှ ရခိုင် ပြည်နယ်တွင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် များနှင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များအကြား တငွေ့ငွေ့ လောင်ကျွမ်း နေသည့် တင်းမာမှု များမှ နောက်ထပ် တစ်ဖန် အုပ်စု နှစ်ခုကြား အကြမ်းဖက် မှုများ ဖြစ်ပွား နိုင်မည်ဟု သတိပေး ပြောကြား လိုက်ပါသည်။ “အကယ်၍ အစိုးရ အနေနဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှု မပြုလုပ်ဘူး ဆိုရင် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ မကြာမီ အချိန်မှာ နောက်ထပ် အကြမ်းဖက်မှု […]
By danyawadi February 23, 2013 Leaveacomment
လွှတ်တော်တွင်ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးဟုပြောဆိုခြင်းကို ဦးရွှေမောင်မှပြန်လည်ချေပ Friday, February 22, 2013ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့ကပြည်သူ့ လွှတ်တော် ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာ လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ အင်အား ၀န်ကြီး ဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးကျော်ကျော်ဝင်း က မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ရိုဟင်ဂျာမရှိဘူး လို့ ငြင်းဆို လိုက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဖြစ် တဲ့ဦးရွှေမောင်က ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာမြန် မာနိုင်ငံမှာ ရှိတယ်ဆိုပြီး ပြန်လည်ချေပလိုက်ပါ တယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်ဟာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဖြစ်ပြီး၊ ရခိုင်ပြည် နယ်မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ြ ဖစ်ပါတယ်။ လ၀က ဒုတိယ၀န်ကြီးရဲ့ စွပ်စွဲ ချက်ကို DVB သတင်းဌာနနဲ့ အင်တာဗျူးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ “ရိုဟင်ဂျာ မရှိဘူး ဆိုပြီးတော့ […]
လွှတ်တော်အမတ်ဦးရွှေမောင်မှ ဒုက္ခသည်စခန်းများ ကိစ္စရှင်းရန်အစိုးရအားတိုက်တွန်း …
By danyawadi February 19, 2013 Leaveacomment
Monday, February 18, 2013ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြေပုံမြို့နယ်ရှိမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်စခန်း (ဓါတ်ပုံ – UNIC) မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့မှ (၁၆) ရက်နေ့ထိ ငါးရက်ကြာ လာရောက်ခဲ့သော ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့် အရေးအထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာသောမတ်ကွင်းတားနားမှ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခ သည်စခန်း များသို့ ၎င်း၏ ခရီးစဉ်အတွင်း သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စခန်းများ၏ အခြေ အနေသည် အကျဉ်းထောင်များနှင့် တူနေသည်ဟု ခရီးစဉ်အပြီး ရန်ကုန်လေဆိပ်၌ ကျင်းပခဲ့သော သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ မစ္စတာ ကွင်းတားနားမှ ဒုက္ခသည်စခန်းများ၏ အခြေအနေမှာ လွန်ခဲ့ သည့်နှစ်သြဂုတ်လ ခရီးစဉ်ကထက် တိုးတက်လာသည် ကိုတွေ့ရသော်လည်း မွတ်စလင် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု များမှာ လွန်စွာ အားနည်းနေကြောင်း […]
By danyawadi January 1, 2013 Leaveacomment
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရွှေမောင်နှင့်ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းအင်တာဗျူး ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင် RB News 31.12.2012 ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်အား ဗွီအိုအေမြန်မာ ပိုင်းအစီအစဉ်မှ ယနေ့ည ၉ နာရီအစီအစဉ်တွင် အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဦးရွှေမောင်နှင့် အင်တာဗျူး မတိုင်မှီ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌဒေါက်တာမျိုးမြင့်ကိုလည်းေ မးမြန်းထားသည်ကို နား ဆင်နိုင်ပါသည်။ ဦးရွှေမောင်မှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်းတောမြို့နယ်တွင် မီးလောင်ဆုံးရှူံးခံရသောဒေသ ခံရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် များမှာ ဒုက္ခသည် အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရသည့်အပြင် အပြစ်ရှိသူများဟုစွပ်စွဲ၍ ဖမ်းဆီး ရန် ၀ရမ်း ထုတ်ခြင်းခံရသည်နှင့် ပတ်သက်၍ တရားမျှမျှတတလေ့လာ စုံစမ်းပေး ရန် ရခိုင်ပြည် နယ်စုံ စမ်းရေး ကော်မရှင်ကိုတောင်းဆိုလိုက်သည်။ အသေးစိတ်ကို Soundcloud Audio Clip မှနားဆင်နိုင်ပါသည်။ ဦးရွှေမောင်နှင့် အင်တာဗျူးသာကိုနားထောင်လိုလျှင် ၂း၄၅ သို့တိုက်ရိုက်သွား၍နားထောင်နိုင်ပါသည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရွှေမောင်နှင့် UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs Valerie Amos တို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်တွေ့ရစဉ် (ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၂)Buthidaung Constituency MP U Shwe Maung attended the Press Conference of UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs Valerie Amos. (Photo – U Shwe Maung)
အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. William Burns နှင့် ရိုဟင်ဂျာလွှတ်တော်အမတ်များကိုယ်စား ဦးရွှေမောင် တွေ့ဆုံ
By danyawadi October 23, 2012 Leaveacomment
အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. William Burns နှင့် ရိုဟင်ဂျာလွှတ်တော်အမတ်များကိုယ်စား ဦးရွှေမောင် တွေ့ဆုံ အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Mr. William Burns တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ရိုဟင်ဂျာလွှတ်တော်အမတ်များကိုယ်စား ဦးရွှေမောင် ( ခ ) U Abdul Razak တက်ရောက် ကြာင်း၊အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. William Burns တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များနှင့် နေပြည်တော်ရှိ ရွှေနန်းတော် ဟော် တယ်တွင်၂၀၁၂ ခု အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ကချင် ကယား ကရင် ချင်း ရှမ်း မွန် ရခိုင် နှင့် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိူးစုများ ကိုယ်စားပြုလွှတ်တော်အမတ်များ ၇ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ ရာ […]
US ဒု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. William Burns, တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆွေးနွေးရာတွင်ရိုဟင်ဂျာလွှတ်တော်အမတ်များ ကိုယ်စား ဦးရွှေမောင် ( ခ ) U Abdul Razak တက်ရောက် …
By danyawadi October 20, 2012 Leaveacomment
အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. William Burns တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ရိုဟင်ဂျာလွှတ်တော်အမတ်များကိုယ်စား ဦးရွှေမောင် ( ခ ) U Abdul Razak တက်ရောက် အေမရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. William Burns တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် နေပြည်တော်ရှိ ရွှေနန်းတော်ဟော်တယ်တွင်၂၀၁၂ ခု အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရာတွင် ကချင် ကယား ကရင် ချင်း ရှမ်း မွန် ရခိုင် နှင့် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိူးစုများ ကိုယ်စားပြုလွှတ်တော်အမတ်များ ၇ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ရာ ရိုဟင်ဂျာလွှတ်တော်အမတ်များ ကိုယ်စား ဦးရွှေမောင် (ခ) U Abdul Razak တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ရခိုတိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုယ်စား ဒေါက်တာ […]
လွှတ်တော်အမတ်ဦးရွှေမောင်ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းပြည်သူ့လွှတ်တော် တွင်မိန့်ခွန်းပြောကြား …..
By danyawadi July 28, 2012 Leaveacomment
ပါလီမန်အမတ်ဦးရွှေမောင်ပြည်သူ့လွတ်တော်တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်၌ဖြစ်ပွါးခဲ့သောအရေးအခင်းနဲ့ ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း။ Video ရိုဟင်ဂျာသတင်း
ဦးရွှေမောင်ပါ(၃)ဦး၏ လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မေး/ဖြေ/ဆွေးနွေး/ဆုံးဖြတ်ချက် …
By danyawadi July 24, 2012 Leaveacomment
Aung Hlaing shared ဒီမို ဖက်တီး‘s photo.
MP U Shwe Maung , Youtube Link
Please subscrìbe my YouTube channel “ShweMaungTube” to watch our activities. I will upload more videos. I hope you will Like them. Thank you for your watching. Your comments are most welcome.
MP U Shwe Maung‘s Parliamentary Speech in Burmese Parliament …
d. Current situation of Arakan and to continue President’s 144 ( State of Emergency) in effected area 2. The MP told that it was very unfortunate to see …
MP U Shwe Maung Explained on Amendment 1982 Citizenship Law …
MP U Shwe Maung explained on amendment of 1982 Citizenship Law to be consistent with the Constitution of Myanmar (Year 2008) and Human Rights standard at …
Interview MP Shwe Maung with MD Noor – YouTube
Interview MP Shwe Maung with MD Noor … (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add Rohingya VisionTV ‘s video to your playlist. Sign in .
Shwe Maung – YouTube
U Shwe Maung (a.k.a) U Abdul Razak, Pyithu Hluttaw Representative (Member of Parliament), Buthidaung Constituency, Rakhine State, Myanmar
Rohingya MP U Shwe Maung‘s Parliamentary Speech in Burmese Parlia Our Rohingya MP U Shwe Maung‘s Speech at Burmese Parliament!! Length: ?19:
MP U ShweMaung PyithuHluttaw Citizenship Law Ammendment 25 …
Unreported News of Rohingya: MP U Shwe Maung‘s Parliamentary …
MP U Shwe Maung‘s Parliamentary Speech in Burmese Parliament Relating to Arakan Crisis … which has been stored in Youtube. Some part may disconnect and complex.
Shwe Maung (ShweMaung_MP) on Twitter
The latest from Shwe Maung (@ShweMaung_MP). Member of Parliament (Pyithu Hluttaw Representative) for Buthidaung Constituency, Rakhine State, Myanmar. Member of Reform …
Shwe Maung – Google+
Shwe Maung – Pyithu Hluttaw Representative for Buthidaung, Rakhine State, Myanmar. – Yangon, Yangon Region, Burma – Yangon
Interview MP Shwe Maung with MD Noor – Rohingya News Agency
Rohingya News Agency – RVISION – Interview MP Shwe Maung with MD Noor
Myanmar MP hits back at official denial of Rohingya existence
Yangon, Sunday, 12 Rabi Al-Thani 1434/23 February 2013 (IINA) – Shwe Maung, member of Myanmar parliament, has fired back at claims that Rohingya Muslims do not …
Shwe Maung represents Buthidaung constituency in northern Arakan state. … A member of parliament has fired back at claims that Rohingya Muslims do not exist in …
U Shwe | Fundstellen im Internet | cyclopaedia.net
U Shwe Yoe and Daw Moe – YouTube. … According to the message posted by MP U Shwe Maung on Twitter, Tutu would giveaspeech at the American Centre in Yangon on …
Art Of Leadership-By: Muhammad Noor (Part -3) | Rohingya …
Interview MP Shwe Maung with MD Noor. News in Views … “Rvision Daily News 26-Nov-2013” http://www.youtube.com/watch?v=0s8sSTwTpvE&feature=share.
Shwe Mann Tin Mg Mp3mp3 download – Free mp3 music downloads …
Download shwe mann tin mg mp3for free on Freemp3go – largest free mp3 database for instant play or downloads – Shwe Man Tin Maung– Taw Lar- Myanmar dance song …
Myanmar Shwe Man Tin Maung Zat Taw (Oct 15 2013) MP3 Music …
The Myanmar Shwe Man Tin Maung Zat Taw music mp3 videos. Listen and play to Myanmar Shwe Man Tin Maung Zat Taw MP3 song online and download its mp3 for free and …
Shwe Maung – Email address, photos, phone numbers to Shwe Maung
Information about Shwe Maung like photos, contact information, job and many more on …
Shwe – Mp3 Download Hulkshare – Page 9
YouTube To Mp3 | DMCA. … MP U Shwe Maung explained on amendment of 1982 Citizenship Law to be consistent with the Constitution of Myanmar (Year 2008) …
Comments on: 4-July-2013 RFA & MP U Shwe Maung interview on …
A Rohingya Media Network … Comments on: 4-July-2013 RFA & MP U Shwe Maung interview on Arakan situation
Unreported News of Rohingya: Rohingya Video
YouTube: http://youtube.com/wearehelporg Produced by: http://theplaystudio.com … Rohingya MP U Shwe Maung Explained on Amendment 1982 Citizenship Law.25.7. 2012
Myanmar President U Thein Sein’s Speech at Q&A session by …
From youtube. 05:18. Myanmar 2012 – On the beach in Ngwe Saung. 4517 views. … Rohingya MP U Shwe Maung Buthidaung Township Speech in Myanmar parliament. by Bolu.
Myanmar detains Rohingya community leader ucanews.com
Shwe Maung,aRohingya MP from the ruling Union Solidarity and Development Party, said this arrest followed that of Kyaw Hla Aung, … Shwe Maung said.
Myanmar Monitor: 03/18/13
A self-proclaimed Rohingya USDP MP, Shwe Maung, who represents Buthidaung constituency in Maungdaw township in northern Arakan state, …
People’s Assembly – 1st Session – Parliament Watch – ALTSEAN …
• Shwe Maung aka Abdu Rawzek (USDP): … Proposals by MP: 5. Ngon Maung: 2. Khin Maung Yi aka Khine Maung Yi …
MP calls for census during debate on Rakhine State … U Shwe Maung, the Amyotha Hluttaw representative for Rakhine State constituency 7, …